🥇 uphendlo lwesicelo
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 61
Ividiyo yokubalwa kwemali yesicelo
Uku-odola ingxelo yesicelo
Xa u-odola, kufuneka ugcine iirekhodi zesicelo sabathengi, kuba umgangatho womsebenzi kunye nexesha lokuphunyezwa kwawo, kunye nempumelelo yeshishini, kuxhomekeke koku. Akusoloko kulula, kuyakhawuleza, kwaye kufanelekile ukufumana izicelo kunye nokurekhoda usetyenziso kwiphepha. Emva kwayo yonke loo nto, le sele sele ikhethwe lixesha lokuphendula, kuba namhlanje yonke into iyenziwa ngekhompyutha. Xa usebenzisa iinkqubo ezizenzekelayo ze-elektroniki, awuzenzeli kuphela iinkqubo zokuvelisa, ukunciphisa iindleko zemali kunye nexesha, kodwa wandise abathengi bakho, wandise inzuzo kunye nemveliso. Sukulibazisa ukwenziwa kwesicelo esizenzekelayo, kwaye ulumke xa ukhetha, unikwe ukhetho olukhulu kunye nolwahlulo, kokubini kuseto kunye namaxabiso. Khumbula ukuba ukubalwa kwemali ngesicelo akufuneki kube lula kuphela kodwa kukwahluka, kuphucula iinkqubo zemveliso, kunye nokulula kunye nokukhawuleza. Kukho ukhetho olukhulu kwintengiso, kodwa enye yezona zinto zilungileyo zihlala ziluncedo oluzenzekelayo kwinkqubo ye-Software ye-USU, ngonxibelelwano olulula ukuliqonda kunye neendleko. Umgaqo-nkqubo wamaxabiso asezantsi wenkampani yethu ayisiyiyo yonke imali eyongiweyo, kuba akukho mrhumo wobhaliso, onokuthi ungabonelelwa ngabo bonke abaphuhlisi bezinto zobuchwephesha. Kananjalo, ukukhula kwethu kubasebenzisi abaninzi, kuvumela abasebenzi ukuba babe nokufikelela ngexesha elinye kumasebe ngamasebe kunye namasebe, babe nokufikelela kwizinto eziyimfuneko, ngokusekwe kumalungelo ahlukeneyo, ukukhuselwa okuthembekileyo kwedatha yolwazi egcinwe kwinkqubo yokubala enye. Kukwafanelekile ukuba uqaphele ukuba akusafuneki ukuba uchithe ixesha elininzi ukhangela iifayile kunye nolwazi oludingayo, kuba yonke into igcinwa ngokuzenzekelayo kwiserver ekude, kwaye unokuyifumana ngokwenjini yokukhangela imeko. Idatha ihlaziywa rhoqo ukunqanda ukudideka kunye neempazamo. Ngendlela, ngokubhekisele kwiimpazamo. Awusayi kuphinda ukhathazeke malunga nomgangatho wolwazi olufakiweyo, kuba kukho ukungeniswa kwedatha evela kwimithombo eyahlukeneyo. Kwakhona ukungenisa ngaphakathi kunciphisa ixesha kunye nomzamo wabasebenzi, nto leyo eyinzuzo kumbutho. Umphathi angonyusa ukusebenza ngokukuko, abeke esweni umsebenzi wabasebenzi kunye nempumelelo yeshishini, xa efumana iingxelo malunga nokulandelwa kweeyure zomsebenzi kunye nedatha yesicelo seenkcukacha-manani kwiodolo kunye nenzuzo yeshishini, ukuhlalutya isicelo sabathengi kunye nokukhula kwabo. Ukwamkelwa kweentlawulo, ukulungiselela ukulungeleka nokusebenza ngokukuko, kunokwenziwa ngemali nangezindlela ezingezizo ezemali. Ungadwelisa ngokungapheliyo izibonelelo ze-USU zesoftware yokucela ukubalwa kwemali, kodwa kutheni uchitha ixesha elininzi, kuba ungazivavanya ngokuzimeleyo into eluncedo kwaye wazi iimodyuli kunye nobuchule kufutshane, kwaye simahla, ngokufaka ingxelo yedemo. Kwimibuzo eyongezelelweyo, iingcali zethu ziyavuya ukukucebisa okanye zilandele ikhonkco kwiwebhusayithi yethu kwaye zifumane ulwazi oluneenkcukacha kwimibuzo oyifunayo.
Ukuzenzekelayo kokusebenza kwi-accounting yeefowuni, ngoncedo lwenkqubo yethu yendalo iphela, iba lula kwaye ikhawuleze, icace kwaye ibengcono. Ulwazi lwesicelo sokucwangciswa kwedatha luzenzekelayo kwaye iiyure zokusebenza zilungiselelwe. Inkqubo yokubhalwa kwesicelo sokurekhodwa ngekhompyuter ivumela ukungena ngokungenasiphelo kunye nokugcina idatha yolwazi. Izinto ezinokugcinwa ngokuzenzekelayo kwiitafile ezifunwayo. Ukusetyenziswa kweefomathi zoxwebhu ezahlukeneyo kukwavumela ukukhuphela idatha kwimithombo eyahlukeneyo. Ukukhangela isicelo ngokukhawuleza okanye olunye ulwazi usebenzisa i-injini yokukhangela. Ukufakwa kwedatha ngokuzenzekelayo kwenza ukuba ixesha labasebenzi lisebenze. Inkqubo yesaziso ivumela ukukhumbuza ngeziganeko ezibalulekileyo ngexesha. Ukulandelwa kwexesha kwenza ukuba kube lula ukulungelelanisa kunye nokuqeqesha abasebenzi, ukuhlalutya umgangatho kunye nexesha lomsebenzi, kunye nokubala umvuzo. Imiyalezo yeSMS ayisebenzisi ukunika ulwazi kuphela kodwa nokufumana ingxelo, ingxelo ngomgangatho womsebenzi, xa unxibelelana, kugcinwa iirekhodi zobalo kwiijenali ezahlukileyo. Ukuhanjiswa ngokuzenzekelayo kwemisebenzi phakathi kwabasebenzi, kuthathelwa ingqalelo isicelo esifunyenweyo. Utshintsho lunokwenziwa kwisicelo, kuthathelwa ingqalelo ulondolozo lwejenali ze-elektroniki, ukulandela umkhondo wenqanaba lokuphunyezwa kwazo.
Kwinkqubo yobalo, unokugcina ulwazi kwimithamo engenamda. Isicelo sinika umahluko kumalungelo abasebenzisi. Ubuntu kunye nemfihlo zinikezelwa kumsebenzisi ngamnye. Useto loqwalaselo olulula. Ukusetyenziswa kweenkqubo zokuhlawula ezifanelekileyo, zombini ngemali ezinkozo nangaphandle kwemali. Uhlobo lwedemo lwasimahla luyafumaneka. Ujongano oluhle kunye nolusebenziseka lula, olwenziwe lula kwaye olwenziwe lula kumsebenzisi ngamnye.
Kule mihla, ukubalwa kobudlelwane babathengi okusebenzayo ngokuthe ngcembe kuya kuba yimpumelelo kunye nokukhula okuthe kratya kwesicwangciso samashishini sanamhlanje. Ukugxila kwamashishini ekuphuculeni unxibelelwano lwabathengi kungenxa yotyekelo oluninzi, ngakumbi ukonyuka kobutshaba, ukonyuka kweemfuno zabathengi kwipropathi yezixhobo ezibonelelweyo kunye nenqanaba lenkonzo, ukunciphisa ukusebenza kweendlela zentengiso zemveli, kunye nokubonakala Itekhnoloji entsha yokunxibelelana nabathengi kunye nokusebenza kwamacandelo eshishini. Kungenxa yoko le nto ingxaki yokuququzelela kunye nokuqinisekisa ukusebenza kakuhle kwabathengi ikhawuleza kakhulu. Oku kunyanzelisa iimfuno zayo kubungakanani benkonzo, kwaye okokuqala kwizinto ezinje ngesantya senkonzo yabathengi, ukungabikho kweempazamo, kunye nokufumaneka kwedatha malunga nonxibelelwano lwabathengi bangaphambili. Ezo mfuno zinokuhlangatyezwa kuphela ngokusebenzisa usetyenziso oluzenzekelayo lokusetyenziswa kwengxelo. Kwimakethi yale nkqubo yanamhlanje, kukho inani elikhulu leenkqubo zokurekhoda isicelo somsebenzisi, ukubala inani lokuncitshiswa kunye nezibonelelo, kodwa uninzi lwazo lujolise kwindawo ebanzi kakhulu kwaye aziqwalaseli ii-specs ze inkampani ethile. Ezinye zazo ziswele ukusebenza okufunekayo, ezinye zinokhetho 'olungaqhelekanga' ekungekho sizathu sokuhlawula, konke oku kufuna ukukhula komntu ngamnye kwinkqubo yeemfuno zenkampani. Kodwa, kwimveliso eyilelwe ngokukodwa isoftware ye-USU, uya kusebenzisa kuphela eyona misebenzi ibalulekileyo neluncedo kuwe kunye nabaxhasi bakho.